Video: Lionel Messi Oo Seddexleey Dhaliyay Xilli Argentina Ayaa 4-3 Ku Dubatay Xulka Brazil - jornalizem
Video: Lionel Messi Oo Seddexleey Dhaliyay Xilli Argentina Ayaa 4-3 Ku Dubatay Xulka Brazil
Lionel Messi ayaa dhaliyay seddexleey xilli Argentina ay 4-3 ku garaaceen xulka ay xafiiltamaan ee Brazil ciyaar saaxiibtinimo oo ay xalay yeesheen, waxaana guuldaradan ay dhabar jab ku tahay xulka Brazil oo diyaargarow ugu jira ciyaaraha Olimbikada London.
Brazil ayaa hogaanka ciyaarta qabatay daqiiqadii 23aad markii laad xor ah oo si dhaqso ah loo tuuray uu helay Ramulo, kaasoo shabaqa ku hubsaday kubada xilli daafacyada Argentina ay ku doodayeen inuu ku jiray offside.
Messi ayaana barbareeyay goolkaas daqiiqadii 31aad, ka dib markii Gonzalo Higuain uu kubad ka soo dhacay kabtanka Brazil Sandro, waxaana uu ku quudiyay Messi kaasoo kubada meel geeska ah ka geliyay shabaqa.
Seddex daqiiqo gudaheed, xiddiga sannadka adduunka ayaa hogaanka u dhiibay Argentina, markii uu baas qatar ah ka helay Angel Di Maria islamarkaana uu kubada la maray goolhayaha Brazil Rafael Cabral.
Qeybtii labaad ee ciyaarta Brazil ayaa ku soo laabatay ciyaarta, iyadoo Oscar uu ka dhigay ciyaarta 2-2 daqiiqadii 56aad, waxaana Brazil mar kale hogaanka u dhiibay Hulk oo ka faa’ideystay kooner uu soo tuuray Neymar.
Argentina ayaa durbadiiba soo kabsatay iyadoo Federico Fernandez uu madax ugu barbareeyay daqiiqadii 75aad ee ciyaarta.
Lix daqiiqo oo ka dhimaneyd waqtigii caadiga ahaa ee ciyaarta, Messi ayaa dhaliyay goolkii ugu fiicnaa kulankaan ahaana goolkiisii seddexaad, markii uu kubada si qatar ah uga dhaliyay banaanka dillinta ganaaxa.
“Mar walba waa ay qurux badan tahay inaad garaacdo Brazil, aad ayaan ugu faraxsanahay seddexdeyda gool” ayuu Messi u sheegay suxufiyiinta ciyaarta ka dib.
Messi ayaa xilliyadii la soo dhaafay lagu eedeynayay inuusan xulka qaranka Argentina ugu ciyaarin sida uu ugu ciyaaro Barcelona halkaasoo uu ku qaatay seddexdiisa sanno ee ugu danbeysay laacibka sannadka adduunka.
Lakiin seddexleydiisii xalay ayaa ka dhigeysa inuu Messi labo hat-trick dhaliyay seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee uu u safto Argentina, waxaana goolashiisa ay ka dhigeysaa 26 gool 70 kulan oo uu saftay.